Kushambadzira Kwave Iyo Lynchpin yeMuchinjikwa-Unoshanda Kubudirira mumakambani | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 30, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Zvakaoma kudoma poindi ipi muhupenyu hwangu yakandigadzirira kubudirira. Pandaive muNavy, pandakanga ndiri Electrician, sainjiniya ndaive zvakare mukuru wemoto. Ini zvakare ndakagadzwa ESWS, yakanyoreswa pamusoro pehondo nyanzvi nyanzvi yakandipa muongororwo wezvese mabasa nehurongwa pane yangu ngarava. Ruzivo rwekuyambuka-ruzivo uye chiitiko chaive hwaro hwehunhu hwangu hwehutungamiriri hushoma.
Pashure peNavy, ndakashanda mupepanhau ndichiita zvemagetsi mumaindasitiri. Kugona kwangu kudzidza uye kushanda muchinjikwa-zvinoshanda kwakatungamira mukusimudzira kwangu kwekutanga. Pane imwe nguva ini ndanga ndiri pamusoro pevamwe, kambani yakaisa mari yakawanda mukusimudzira kwangu, ichindiisa kuburikidza nekudzidziswa kwekambani kubva kunodzidziswa zvevashandi, bhajeti yemakambani, kudzidzisa, kusimudzira kusimudzira, uye huwandu hwedzimwe hurongwa hwehutungamiriri nehutungamiriri. Ini ndaikwanisa kuchinjika nyore kuita mutongi uye muongorori chinzvimbo, ndobva ndaenda kushambadziro yedhatabhesi.
Kwemakumi maviri emakore ndashanda mukushambadzira nzvimbo dzehutungamiriri uye nevatungamiriri kutenderera nyika. Makore makumi maviri apfuura, kukura kwebasa rangu kwaiwanzo kuve mukati mebazi rekushambadzira, asi ikozvino ndinosangana nevatungamiriri vakuru kupfuura nakare kose. Chikonzero cheichi ndechekuti kushambadzira kwedhijitari kwave chiratidzo chakatendeka uye fungidziro yekushanda kwemakambani.
Makumi maviri emakore apfuura, kushambadzira kwaive kwakanyanya nzira-nzira nzira yakatumira kushambadzira nemishandirapamwe uyezve kuyera mhinduro mukati memakore. Zvino, -Chaicho nguva kutsvagisa kwekushambadzira nedata zvinoratidza kushanda kwese kwakakosha kuita chiratidzo kwesangano - kungave kugutsikana kwevashandi, kuchengetedzwa kwevatengi, chinzvimbo chemakwikwi, nezvimwewo Nechikonzero ichi, makambani mazhinji uye akawanda arikutora hutungamiriri hwevakuru uye kuita mabasa ehutungamiriri anoshanda. kushambadzira kuedza.
Huwandu huri kukura hwesangano manejimendi manejimendi ari kusimudzira kushandiswa kwekuyambuka-kunoshanda kusangana mukati memakambani. Kunyangwe kusarudza kutora iyi fomu yehutongi kwaizoda kuronga patsva uye kugovera patsva mabasa, kumisikidza kusangana-inoshanda kusanganisa imhinduro yakakodzera kune kuwedzera kuwanda kwedata hombe uye zvimwe zvazvino kuitika.
Mashandiro anoita Makambani Kuwana Muchinjikwa-Unoshanda Kusanganisa
Chakakosha kuyambuka-chinoshanda kusangana ndiko kuputsa-pasi kwe silos uye kuvaka-humambo mukati mesangano. Mukamuri rebhodhi rine hutano, vatungamiriri vanozvipira - vachiziva kuti kuzvipira kunoitwa mudhipatimendi ravo kunogona kutungamira mukuvandudzwa kwehutano hwekambani. Ndakaita hurukuro dzakajeka nemakambani uye ndakataura navo mukati kuderedza mari yekushambadzira yedhijitari patakaona zvimwe zviwanikwa zvekutengesa zvaive zvichiita zvirinani. Izvi zvaiwanzoitwa pakurasikirwa kwesangano rangu - asi chaive chinhu chaicho chekuitira hutano hwemutengi.
Mune isina kugadzikana boardboard, mutungamiri mumwe nemumwe ari kurwira kuti awedzere huwandu hwavo, kuwedzera mari yebhajeti, uye vanoona dhipatimendi ravo sehwaro hwesangano. Izvi ndezvekufa kwavo pachavo nekuti dhipatimendi rega rinofanira kurarama uye kubudirira. Cheka kugadzirwa kwechigadzirwa uye hunyanzvi hunofa, zvinokuvadza kutengesa mune ramangwana nekuchengetedza. Cheka kutengesa uye kushambadzira kuedza hakuite kuzere kugona kwavo. Cheka kushandira vatengi uye mukurumbira wako wepamhepo udye pane zvakawanikwa zvekushambadzira zvesangano rako. Cheka mabhenefiti uye yako yepamoyo tarenda inosiya kambani.
Statistics Kutsigira Kuyambuka-Kunoshanda Kubatanidzwa:
Makambani anoita ongororo yevatengi dhata anokura nekukurumidza
Masangano anogovera mabasa ekushambadzira mukati memapoka anowanzove neayo marongero ekushambadzira ayo akabatana zvakanyanya nehurongwa hwese hwebhizinesi
Muchinjikwa-unoshanda kusangana unobvumidza yebasa-simba rakarongedzwa modhi iyo inogona kukurumidza kana yakapihwa kumapurojekiti
Mune mamwe mazwi, kushambadzira kwako kunovandudzika nenjere uye kukanganisa kubva kusangano rese, uye mamwe ako madhipatimendi anovandudza nenjere mukuita kwako kwese kushambadzira. Izvi hazvisi zvekushambadzira zvinotungamira, ndezvekushambadzira kubatanidzwa musangano rese.
Muchinjikwa-unoshanda kusanganisa kwakaoma, hazvo, uye zviverengero zvakare zvinoratidza kuti kune zvakare yakanyanya kutadza chiyero inosangana nehurombo kuitisa. Kuti udzidze zvakawanda, tarisa infographic pazasi yakagadzirwa neNew Jersey Institute of Technology's Online Master weBusiness Administration purogiramu yemadhora.